‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ को आजको ब्लाइन्ड अडिसनमा यी ट्याक्सी ड्राइभरले कोच प्रमोदको भन्दा राम्रो गाए, तर यस कारण घरि घरि स्टेज मै रो’ए ! हे’र्नुहोस (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
जानकारी भिडियो मनोरञ्जन
April 17, 2021 April 17, 2021 AdminLeaveaComment on ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ को आजको ब्लाइन्ड अडिसनमा यी ट्याक्सी ड्राइभरले कोच प्रमोदको भन्दा राम्रो गाए, तर यस कारण घरि घरि स्टेज मै रो’ए ! हे’र्नुहोस (भिडियो सहित)
ब्लाइन्ड अडिसनबाट हरेक कोचले छानेका १२÷१२ जना भाग्यमानी प्रतिस्पर्धीले ब्याटल राउन्डमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । यस सिजनमा भने एक जना कोच हेरफेर भएको छ । शो को कोचका रुपमा दीप श्रेष्ठ, प्रमोद खरेल, राजु लामा अघिल्लो सिजन कै कोच निरन्तर रहेका छन् भने तृष्णा गुरुङ नया कोच आएकी छन । थप हेर्नुहोस् भिडियोमाः